Egwuregwu kacha mma Disney maka gam akporo | Gam akporosis
Egwuregwu nwa eze Disney kacha mma maka gam akporo
Paco L Gutierrez | 06/04/2021 11:00 | Egwuregwu gam akporo, Noticias
Disney esola anyị ruo ọtụtụ iri afọ site na ihe nkiri eserese ya, mana ebe ọ bụ na ngwaọrụ mkpanaka bụ akụkụ nke ndụ anyị, ihe nkiri vidio ahụ niile na-eso egwuregwu vidio. Egwuregwu ndị eze nwanyị Disney kachasị mma bụ ihe a na-ahụkarị na njikwa ma ọ bụ PC ma n'oge a nke kachasị bụ ịhụ ha na ekwentị mkpanaaka, n'efu mana yana ohere ịkwụ ụgwọ micro na ngwa ahụ. Odiiri na umuaka ndi nne na nna.
Imirikiti egwuregwu Disney na-ejikarị ụmụntakịrị eme ihe, ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ụdị egwuregwu dị iche iche, dịka egwuregwu mgbagwoju anya, agbụrụ, egwuregwu ma ọ bụ ilu.. All egwuregwu nwere ike ibudata nanị na PlayStore nke anyị gam akporo ọnụ. N’isiokwu a anyị ga-ahapụrụ gị nhọrọ kacha mma Disney nwa ada egwuregwu anyị nwere ike ịchọta n’ụlọ ahịa Google.
1 Disney Princess Ime Anwansi
2 Oyi kpọnwụrụ Free Fall
3 Alaeze Anwansi Anwansi
4 Disney Frozen Adventures
5 Akụkọ Disney
6 Disney Emoji Blitz
Disney Princess Ime Anwansi
Egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya nke Gameloft mepụtara ma mepụtara nke ndị ọrụ igwe dị mfe: anyị na-eji mkpịsị aka anyị eme ihe iji megharịa akụ ndị ahụ wee kpọkọta ndị nwere otu agba iji mee ka ha pụọ ​​ma dozie egwuregwu ahụ. Egwuregwu ga-enye anyị usoro nke nkwalite na anyị ga-enweta n'oge egwuregwu ga-enyere anyị aka ime combos na-ewe ezigbo bara nnukwu uru ngwa ngwa ma n'ụzọ dị otú a nweta akara ka mma.
Egwuregwu ahụ, dị ka aha ya na-egosi, na-agụ ndị eze sitere na sagas niile Disney mepụtara, n'etiti ha anyị hụrụ Ariel, Jasmine, Bella na ndị ọzọ. Ka anyị na-egwu egwu ma na-emezu ọkwa anyị ga-emeghe ndị protagonists nke Disney sagas dị iche iche. Anyị ga-emeghekwa ọnọdụ ndị ọzọ ka anyị kpọọ na. Ngwa a bụ n'efu ibudata, mana ọ nwere ego na ngwa ahụ, nke ga-eme ka anyị meghee ọdịnaya na-enweghị ịme ya mgbe ị na-egwu egwu.
Oyi kpọnwụrụ Free Fall
Otu n’ime egwuregwu Disney nwere ọtụtụ nbudata na Google PlayStore ma ọ dị ka ọ dị mma nye anyị ịtụle ogo egwuregwu na oke iwe nke eluigwe na ala Disney kere site na obere ụmụaka. Na egwuregwu a anyị ga-esonyere Elza, Anna na Olaf n'etiti ndị ọzọ dozie egwuregwu mgbagwoju anya yiri nke Disney Princess Ime Anwansi bara nnukwu uru ma na aesthetics na ntọala iwere kpọmkwem site na Oyi kpọnwụrụ.
Dị ka ọ dị na mbụ ka anyị mezue ọkwa anyị ga-enweta mkpụrụ ego na ụgwọ ọrụ unlock kpọghee ekwt ngwa ngwa ịchọ mma ma hazie onwe anyị ihe ubi na Arendelle na ụlọ ahịa, isi iyi, ụgbọ ala n'etiti ihe ndị ọzọ. Nbudata nke ngwa a zuru oke mana ọ gụnyere ịkwụ ụgwọ n'ime ngwa iji kpọghee ihe ịchọ mma, ọ gụnyekwara mgbasa ozi na-abụkarị ihe na-adịghị mma.
Dis Fall oyi na-atụ anwụ na-ada
Alaeze Anwansi Anwansi
Aha nke mepụtara Gameloft nke na-akpọrọ anyị gaa ogige Disney na n'ihi ọbụbụ ọnụ sitere na Malefica, ogige ahụ dum ebibiwo. Anyị ga-abụ ndị anyị kwesịrị ilekọta ịlaghachi ogige ahụ na ịma mma ya niile emezu usoro nke ozo na na-alụ ọgụ megide ndị ọjọọ nke ọtụtụ Disney sagas dị ka Scar si n'aka ọdụm King ma ọ bụ Gaston si na Mma na anụ ọhịa. Ọ bụ ihe dị ụtọ nke ukwuu ime ka ndị ọbịa hụ ka nrọ ha mezuru.
N'ime ogige enwere ihe karịrị otu narị ebe nkiri dị iche iche dịnụ karịa 100 agwa sitere na Disney sagas dị n'etiti anyị na-ahụ adaeze dị ka Bella, Little Mermaid, Oyi kpọnwụrụ, Anna ... Nbudata nke egwuregwu ahụ bụ n'efu n'efu n'agbanyeghị na ọ nwere mgbasa ozi na ịkwụ ụgwọ micro n'ime ngwa ahụ. Na mgbakwunye, egwuregwu a nwere ọtụtụ egwuregwu, yabụ anyị nwere ike ịkekọrịta ahụmịhe na ndị egwuregwu ndị ọzọ site na ịntanetị, ma ọ bụ WiFi ma ọ bụ data.
Alaeze Anwansi Disney: Mepụta Ogige Anwansi Gị
Anyị na-alaghachi na Candy Crush-style puzzle game nke ndị protagonists bụ ndị si na ihe nkiri 2 oyi kpọnwụrụ. otu ndi okike nke Disney Frozen Free Fall. Na egwuregwu a anyị ga-ejikọta ọtụtụ ihe bara nnukwu uru iji nweta snowflakes nke ga-enyere anyị aka ịme ụlọ a masịrị anyị na-amasị anyị. Mgbe anyị na-emeri ọtụtụ narị ọkwa jikọtara ọnụ Anyị nwekwara ike banye maka ihe omume pụrụ iche iji kpọghee onyinye ma si otú ahụ nweta ihe ịchọ mma dị mma.
Egwuregwu dị maka nbudata n'efu na Storelọ Ahịa Play ma na-enye ịkwụ ụgwọ n'ime ngwa ahụ, ịkwụ ụgwọ ndị a bụ naanị ma nweta naanị ihe ichoro nke ulo-elu na-enweghị igwu egwu, e depụtara egwuregwu ahụ maka afọ 3+ ma bụrụ ihe ama ama na Storelọ Ahịa Google.
Disney Frozen Adventures: Egwuregwu Ọhụrụ 3 Egwuregwu
Anyị na-abịa egwuregwu na-agbanwe usoro nke ndepụta ntakịrị iji nye anyị otu egwuregwu egwuregwu adaeze Disney, bụ nke nwere egwu na akụkọ banyere ụfọdụ egwuregwu. Egwuregwu na-atọ ezigbo ụtọ nke ga-enye ụmụaka obere oge ntụrụndụ. Egwuregwu ebe anyị nwere ike ihe na agba na akwukwoyana jikọọ ntụpọ iji jee ije dị iche iche. Anyị nwere ike isonye na ọtụtụ narị obere egwuregwu ga-enye anyị ohere ịnweta ụgwọ ọrụ. Gbaa ndi mmuta ume site n’ime ihe dika ichota okwu, dotting, na ihe ndi zoro ezo.
Egwuregwu ahụ lekwasịrị anya na ụmụaka ma nwee ike ịdị mfe ma na-agwụ ike maka ndị okenyeEgwuregwu ahụ n'ozuzu ya dị mfe ma nwee usoro ndị na-atọ ụtọ nke na-enye ọtụtụ ihe dị iche iche na katalọgụ egwuregwu Disney. Dị ka ọtụtụ egwuregwu, ọ bụ kpam kpam free ibudata ọ bụ ezie na ọ na-enye ịkwụ ụgwọ na ngwa.
Developer: Kuato slọ nka
Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ egwuregwu ebe Emoji bụ ndị na-akwado ya, mana Emoji ndị a sitere na mkpụrụedemede Disney, gụnyere ndị eze nwanyị niile nke sagas niile. Mepụtara site na ụmụ okorobịa si Jam City, ọ bụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya dị ka ụfọdụ nke anyị nwere na ndepụta ahụ, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a kama ị ga - anyị ga-ejikọta emoji. Advancega n'ihu na egwuregwu anyị ga-agbaso usoro usoro iji merie na ịnakọta Emojis.
Anyị nwere ike ịkparịta ụka na Emoji niile anyị gbakwunye na nchịkọta anyị ma melite bọọdụ anyị. Ọ nwere ọnọdụ ịntanetị ka anyị wee nwee ike ịma aka ndị enyi anyị na anyị ga-enwe mmemme pụrụ iche ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla. Egwuregwu ahụ, dị ka ndị niile dị na ndepụta ahụ, nweere onwe ya ibudata ma nwee ịzụrụ site na ngwa ahụ.
Ndị a bụ egwuregwu ada eze Disney nke anyị na-akwado site na Androidsis, anyị meghere maka ntụnye gị ma anyị ga-enwe obi ụtọ ịgụ ha na nkọwa. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na egwuregwu maka gam akporo, ị nwekwara ike ịmasị egwuregwu kacha mma nke anyị na-emekwa elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu nwa eze Disney kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu kacha zoo 9 maka gam akporo
[Na vidiyo] 3 fọrọ nke nta ka kpokọtara omume i nwere ike ime na Google oghere